Israa'iil oo bilawday weerar dhulka ah - BBC News Somali
Israa'iil oo bilawday weerar dhulka ah
17 Luulyo 2014
Image caption Tababar Militeri oo si wada jir ah ay u sameynayaan ciidamada Isra'iil iyo kuwa maraykanka
Ciidamada qalabka sida ee Israa’iil ayaa sheegey in ay bilaabeen duulaan dhulka ah oo ka dhan ah magaalada Gaza ee Falastiin.
Waxay sheegeen in ay uga jawaabayaan gantaalada Hamas ku ridayso Israa'iil.
Duulaankani ayaa imanaya xili Qamiistii muddo shan saacadood ah ay socotay xabad joojin lagu sheegay in ay tahay mid loogu tala galay in lagu fududeeyo ''Gargaarka bani'aadanimo'', balse Israa'iil ayaa ka dib bilawday duqeymihii.
Israa’iil waxa ay sheegtey in ay qaaday 1,960 oo weerar xagga cirka ah, halka Ururka Hamas uu gamay 1,380 gantaal tan iyo intii ay xiisadani bilaabatay 8-dii bishan Jully. Qaramada Midoobey oo hadashay waxa ay sheegtey in duqeymaha Israa’iil ay ku burbureen 1,370 oo guri, 18,000 qofna ay ku barakaceen.
Illaa iyo hadda waxaa duqeymaha Israa’iil ku dhintey 230 qof oo reer Falastiin ah, kuwaasi oo badankood ahaa dad rayid ah. Sida ay tabisey wakaalada wararka Falastiin ee Maan, waxaa hadda socda duqeymo xagga cirka, dhulka iyo waliba badda.
Saxaafadda Israa’iil waxa ay sheegtey in ujeedka duulaanka uu yahay in lagu burburiyo godad suurogal ay tahay in ay ka dusaan dagaalyahanada Xamaas iyagoo u talaabaya dhanka Israa’iil.